Xog-hayaha Guud ee JWXO oo Kaadirka Jaaliyada Nairobi maxaa dhex-maray. | ogaden24
Xog-hayaha Guud ee JWXO oo Kaadirka Jaaliyada Nairobi maxaa dhex-maray.
Feb 12, 2019 - Aragtiyood
Xog-hayaha Guud ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia mudane Cabdirixman Shekh Mahdi iyo wafdi Lasocday oo safar Gaaban kujoogay magalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya, ayaa Fursad u Helay inuu Lakulmo Kaadirka Jaaliyada Ogadenia oo su’aalo Kulul waydiiyay.
Kahor su’aalaha Kaadirka mudane Maadey ayaa ka warbixiyay xaalada Guud ee Wadanka Ogadenia wixii u Qabsoomay iyo Halka xaal Haatan marayo, wuxuuna mudane Maadey Kaadirka u sheegay in tan iyo intii ay Qaateen Go’aanka masiiriga ah ee Jabhadu Heshiiska kula Gashay xukuumada Itobiya, ay Qaadeen Talaaboyin wax ku Ool ah oo dhinaca siyaasada ciidanka iyo Arimaha bulshada ba ah.
Waxaa uu sheegay in Jabhadu Haatan bilawday sidii Guud ahaan Gobolada Ogadenia xafiisyada JWXO looga Furi lahaa, taasi oo bilow u ah Guda Galka Hawshii balaadhnayd ee JWXO u badashay mawqifkeeda dagaalka kusalaysnaa.
Mudane Maadeey waxaa uu sidoo kale sheegay in Jabhadu isu diyaarinayso shirwaynihii wada-tashiga shacabka iyo Jabhada, waxaanu Hoosta kaxariiqay in dhamaan shacabka Somaaliyeed shirwaynuhu u Faran-yahay balse 11-ka Gobol Ergoyin is le’eg ayaa laga casumayaa” ayuu Xog-hayaha oo intaasi kudaray in Ergoyinka ay Jaaliyaadka dibadu kuyeelanayaan Ergoyin sidoo kalana marti sharaf Heerar kala duwan leh ay soo xaadiri doonta shirwaynaha.
Mudane Maadeey waxaa uu Gaashaanka u daruuray Hadalada iyo dacaayadaha laga Fidiyay midaynta ciidamada JWXO iyo kuwa deegaanka, waxaanu sheegay in ciidanka ONLF si Toosa uga mid noqonayaan ciidamada deegaanka masuuliyaduna kasaaran tahay mamulka Hada Talada deegaanka Haya Jabhaduna ay xaaladooda lasoconayso.
Warbixinta kadib ayaa waxaa Xog-hayaha Lawaydiiyay Nooca xidhiidh ee kadhexeeya mamulka Farmaajo iyo madaxda ONLF, iyadoo lawada Og-soonyahay dhibaatadii ay u Gaysteen Naftii Hure Qalbidhagax oo cadawga Itobiya ay Hadh cad u Garba duubeen Jabhada ONLF Go’aan dawli ah ku soo saaray inay tahay Argagixiso.
Su’aalaha kusaabsan xidhiidhka JWXO iyo xukuumada Muqdisho oo isu badalay dood kulul oo Kaadirka JWXO si adag uga biyo diideen maadaama aysan wali Kooxda Farmaajo Raali galin buuxda kabixin wixii ay Gaysteen, ayuu mudane Maadeey cadeeyey in kulamada JWXO iyo dawlada Somaaliya oo mudo soo socday aysan sida lamoodayo.
Xog-haye Maadeey waxaa uu kudooday in ilaa Asmara iyo kulankii ugu dambeeyay ee maalin kahor Addis ababa kudhex-maray, waxa ugu muhiimsan ee ay kawada Hadlayeen uu yahay in Horta dawlada Somaaliya si rasmi ah Raali Galin uga bixiso Gafkii ay shacabka Somaaliyed Jabhada ONLF iyo Halgame Qalbidhagax kagaleen, waxaana mudane Maadeey uu Hoosta kaxariiqay inay meel Fiican wax marayaan wax kastana sidii loogu Talagalay kusocdaan.
Mudane Maadeey waxaa uu cadeeyay in madaxwayne Madaxwayne Farmaajo si rasmi ah casuumad ugu Fidiyay madaxda sare ee JWXO, Halkaasi oo dooda ugu adagi kadhici doonto Hadii rabi Idmo balse haatan ay wax kaste ka Hormarinayaan sidii Hawlaha Gudaha Ogadenia kasocda loo dar-dargalin lahaa.